ဒန်းနိသျှဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
၆�0 million (2019)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Nordic Council
Regions where Danish is the national language
Regions where Danish is an official language but notamajority native language
Regions where Danish isaminority language
ဒိန်းမတ် ( /ˈdeɪnɪʃ/ link=| ဒီအသံအကြောင်း /ˈdeɪnɪʃ/ ; dansk pronounced [ˈtænˀsk] ( နားဆင်) link=| ဒီအသံအကြောင်း , dansk sprog [ˈtænˀsk ˈspʁɔwˀ] )စကားသည် တစ်ဦးဖြစ်သည် မြောက်ပိုင်းဂျာမန်နွယ်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ပြောဆိုသူ ခြောက်သန်းခန့်ရှိရာ ဒိန်းမတ်, ဂရင်းလန်း နှင့်ဒေသတွင်း၌ တောင်ပိုင်း ရှလဂ်ဝစ် မြောက်ပိုင်းအတွက် ဂျာမနီ ကရှိပါတယ်ရှိရာ, လူနည်းစုဘာသာစကား အနေအထားရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အသေးစားဒိနျးမတျစကားပြောအသိုင်းအဝိုင်း၌တွေ့ကြသည် နော်ဝေ, ဆွီဒင်, စပိန်, အ ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ကနေဒါ, ဘရာဇီး နှင့် အာဂျင်တီးနား ။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ဘာသာစကားပြောင်းကုန်ပြီ မြို့ပြဒေသများရှိ၏အကြောင်းကို 15-20% လူဦးရေ ၏ ဂရင်းလန်း သူတို့ရဲ့အဖြစ်ဒိန်းမတ်မပြောတတ် ပထမဦးဆုံးဘာသာစကား ။
↑ dansk — Den Danske Ordbog။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "ဒန်းနိသျှဘာသာစကား"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Danish"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Jutish"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒန်းနိသျှဘာသာစကား&oldid=697786" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။